Chibage chekugocha neSeed Co | Kwayedza
Chibage chekugocha neSeed Co
14 Aug, 2020 - 00:08	 2020-08-13T15:24:07+00:00 2020-08-14T00:04:24+00:00 0 Views
Hardwick, murimi wepaInsukhamin Irrigation Scheme, aine mazimiguri echibage murusero.
MAKADII varimi kumativi ose enyika? Heunoyi mukana wokuita mari nechibage chekugocha.
Isu veSeed Co hatiregi varimi vedu vachisara kumashure pakuita mari nokuda kwekuti tiri muChirimo. Kune avo vane madiridziro, vanogona kuita mari nechibage chekugocha.
Tikatarisa pamusika tinoona varimi vachitengesa chibage US$3 pamiguri gumi nemiviri. Varimi vedu vemadiridziro madiki vane ndima dzinotangira pa0.1 hekita kuenda 0.5 hekita vasina kukwanisa kurima gorosi vanokwanisa kurima chibage chekugocha vakaita mari yakanakisa pakandima kadiki.
Semuenzaniso, murimi akarima 0.1ha anoisa madzinde zviuru zvitatu nemazana manomwe kusvika kuzviuru zvina nemazana mana. Otengesa hake zviuru zvitatu kusvika kuzviuru zvitatu nepfumbamwe achiita $1 pamiguri mina (4). Murimi uyu anowana mazana manomwe nemakumi mashanu kusvika kumazana mapfumbamwe nemakumi manomwe emadhora ane madhora mashanu ekuAmerica pa0.1ha. Iyi imari yakanaka zvikuru varimi.
Tine vamwe varimi vanorimawo vari muInsukamini Irrigation Scheme iri kuLower Gweru.
Pavarimi ava tina Hardwick (uyu akabata tswanda yechibage) ave nenguva refu achirima Seed Co 727.
Anoti: “Ini ndiri murimi wechibage cheSeed Co 727 chatinorimira kutengesera vanogocha mudhorobha reGweru. Chakaita kuti tisarudze mbeu yeNzou Seed Co 727 ndechekuti inotipa miguri mihombe saka haizotinetse kutengesa.
“Vatengi vedu vanofarira chibage chine miguri mihombe uye chinogara kwenguva refu chisati chafuruka. Saka mbeu yeSeed Co 727 ndozvinoita kuti ifarirwe nevanogocha chibage pamusika wemabhazi nedzimwe nzvimbo.”
Vamwe vanorima chibage chekugocha ndiVaMachau Phenias vekuward 19. VaMachau vakapura mari vari kuMakwikwi kuShurugwi pedyo nekuUnki Mine.
VaMachau vanoti, “Ndinorima chibage chekutengesera vanogocha panguva ino varimi vasina madiridziro vasingakwanise kurima chibage. Chibage ichi chinotengwa nemari yepamusoro nokuti kunenge kuine vanhu vashoma vakarima chibage. Kana murimi achida kuita mari nechibage chekugocha, anosarudza mbeu inomupa miguri mihombe seSeed Co 727, haizokunetsa kutengesa pamusika. Kazhinji vatengi vakangoziva kuti chibage chako chaibva vanouya kuzotengera pamunda. Ini chibage ndinoita madhora matatu eku America pamiguri gumi nemiviri.”
Saka ngatimbotaura zvekusarudza mbeu yechibage chekugocha. Ichokwadi varimi vazhinji vanoita mari nechibage chekugocha, asi pane dzimwe nguva murimi anozoti chibage chavo hachina kuzotengwa nokuti vatengi vange vave kutenga pane mumwe zvichienderana nemhando yaakarima.
Chibage chekugocha hatizochiwanze muminda zvekudarika madzinde zviuru makumi mana nezvisere pamaeka maviri nechidimbu, miguri yacho inozoita midiki. Hatifanirezve kudzikisa huwandu hwechibage kuenda pasi pemadzinde zvuru makumi matatu nezvinomwe tinorasikirwa nemiguri yakawanda yatinenge tisina kudyara kunyange zvazvo tichiwana miguri mihombe.
Tikatarisa vanhu vazhinji pakutenga chibage chakagochwa vanoda miguri mikuru, isingaputani kana wapedza kugochwa. Pane dzimwe nguva murimi anogona kubudisa chibage chekugocha chine miguri midiki chigotengwa ndokunge abudisa chibage chake kusina vane chine miguri mihombe.
Ngatimbopindai muSeed Co tibure mbeu dzedu maringe nekurimira kugocha. Vazhinji vedu nekuda kwechando tinomhanyidzana nekudyara chibage chekugocha mumwedzi waNyamavhuvhu chando chichitanga kupera.
Kana tichida kudyara chibage chinokasika kuibva kutangira chimwe muvhiki rekutanga raNyamavhuvhu vanhu vese vachidyara, ngatitorei SC403, SC513 kana SC529. Idzi mbeu dzinotora nguva pfupi iri pasi pemazuva makumi mapfumbamwe mave kutotengesa, asi mbeu dzedu dzinotipa miguri midiki. Tinokwanisa kutengesa chibage chedu tisingarwire vatengi nevane chibage chine mihupi mikuru.
Kana tave kuda mbeu dzemiguri yepakati nepakati, dzinotora mazuva zana negumi kuti dziibve zvichienderana nenzvimbo seSC608
Iyi imbeu yeyellow vamwe vanoiti yeKenya, imbue ichipa miguri iri pakati nepakati pakukura uye inopa utano pakudya ichitapira kana yagochwa. SC608 haikasike kufuruka, inogona kugara kwemazuva anodarika mashanu uchigocha.
Kana chibage chinenge chasara pakutengesa vamwe vanosanganisa nechikafu chehuku dzemazai.
Toenda pabeu dzinotipa chibage chichena, SC659 ichangoburwa neSC649.
Mbeu idzi dzine miguri iri pakati nepakati asi dzinotora mwaka mupfupi nepakati kuibva dzichitipa tsanga huru. Murimi anogona kurima mbeu idzi agotengesa mbeu dzake zvisina kubvutirana vatengi nevamwe nekuti dzemwaka mikuru dzinenge dzisati dzaibva.
Tochipedzisira nembeu dzinotipa miguri mihombe. Tine SC727 vamwe vanoiti Cassa Banana pamusika neSC719. Idzi imbeu dzinotora mwaka wakati rebei pachigadzirwa mwana akarebesa zvekuti panoibva mbeu idzi vose vane chibage chine miguri midiki hachichatengeseke.
Saka panguva ino yekurima chibage chekugocha varimi sarudzai mbeu dzenyu zvakanaka uye mbeu dzese idzi munodziwana muzvitoro zvakasiyana kwamuri, uye pavarimisi venyu veSeed Co vari kudunhu renyu.
Huyai mutore mbeu dzenyu muite mari nechibage chekugocha.
KUTI SEEDCO NDOKUTI MBEU
Davson Machaya murimisi weSeed Co